Ukubuka okuphambili kwasolwandle! I-Trieste - I-Airbnb
Ukubuka okuphambili kwasolwandle! I-Trieste
Duino-aurisina, Friuli-Venezia Giulia, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Elda
U-Elda Ungumbungazi ovelele
Vula amehlo akho ekuseni futhi uzithole unombono omangalisayo wolwandle yilokho esingathanda ukukwenza nawe. Kuwuzwela okumangalisayo. I-lift izokuletha ebhishi yangasese futhi uzobe ubhukuda endaweni yemvelo. Idolobha lase-Trieste litholakala ngemizuzu engu-10 uma uhamba ngemoto futhi futhi uzozitholela eyakho kwenye yedolobha elihle kakhulu lase-Italy olwandle.
Ifulethi elihle endaweni yokuhlala ebheke olwandle enokufinyelela kwangasese ebhishi (ikheshi eliholela ngqo ebhishi). Ibhishi alikaze libe nabantu abaningi kakhulu, amatshe namatshe amatshe + i-pier encane ekhonkolo, enesevisi yokuvikela impilo yangasese.
Indlu entsha, enefenisha esanda kufakwa, enomshini wokuqandisa nokushisisa umoya.
Amafasitela amakhulu avulekile anezindawo ezinhle zolwandle.
Igalaji langasese. Ukuxhumeka ku-inthanethi.
Imizuzu engu-5 ukusuka ekuphumeni kwemoto ye-A4 nemizuzu engu-15 ukusuka e-Trieste.
Eduze kakhulu ne-Castle of Miramare kanye ne-Castle of Duino.
Kuhle kakhulu njengesiqalo futhi kulabo abangafuni ukuthatha iholide ngasolwandle kodwa bafuna ukwazi izindawo ezivuselela kakhulu zase-Friuli Venezia Giulia nase-Slovenia eseduze.
(I-Aquileia - I-Grado ingafinyelelwa emizuzwini engaba ngu-30; I-Venice ingafinyelelwa cishe emahoreni angu-1; I-Grotte di Postumia emizuzwini engaba ngu-50)
Ibhishi langasese elinezindawo zokuphumula ezingu-2 kanye nesambulela, indawo yokudlela encane ngaphakathi kwe-Residance ne-Private Garage.
Noma nini lapho udinga sizotholakala nganoma yiluphi usizo
Phezulu emgwaqweni oyinhloko kukhona ibhasi lomphakathi eliqondiswe ku-Trieste, i-Udine, i-Gorizia ne-Grado.
I-HDTV engu-42" ene- I-Netflix, I-Amazon Prime Video, Disney+, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukusekela nganoma yisiphi isicelo esikhethekile.
UElda Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Duino-aurisina namaphethelo